Association nke Ubi Vineyard - WRSP
NKWUKWU NDỊ CHINEKE NA-ECHICHE
1934 (February 25): John Wimber mụrụ na Kirksville, Missouri ma ọ bụ Peoria, Illinois.
C1940: Wimber natara saxophone mbụ ya.
C1946: Wimber na nne ya kwagara California.
1949: Wimber mere ọhụụ ọkachamara ya.
1955: Wimber zutere nwunye ya n'ọdịnihu, Carol, onye so na Oge a, ya prom egbe. Di na nwunye ahụ lụrụ ọnwa asaa ka e mesịrị. Oge a ga-arụ ọrụ sekit Las Vegas maka afọ ise ọzọ. Wimber (dị ka Johnny Wimber) na-egwu bọtịnụ.
1960: Ndị Wimber chere nsogbu alụmdi na nwunye ihu ma kewapụ. Nkewa ahụ kwụsịrị mgbe onye ọ bụla tikuru Chineke maka enyemaka. Di na nwunye a lụgharịrị na Roman Katọlik. Ha na-aga Nzukọ Ndị Enyi na ọmụmụ Bible. Carol malitere ọmụmụ Bible n’ụlọ ha.
1962: Ndị Wimbers were Bobby Hatfield na Bill Medley maka Oge a. Ndị ahụ mesịrị ghọọ Ụmụnna Ndị Ezi Omume, na Wimber na keyboards.
1962: Site na Oge'Dick Heyling, onye na-akụ ọkpọ, ndị Wimbers zutere Quaker dinara ozioma Gunner Payne wee malite ịga ọmụmụ Bible nke Payne n'ụlọ Heyling.
1963: John na Carol Wimber nwere ahụmịhe ngbanwe n'otu oge n'otu oge ọmụmụ Bible nke Payne. Ndị Wimbers nọgidere na-esonye na ndị otu ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ site na Nzukọ Ndị Enyi, na Gunner Payne na Heylings, na n'ụlọ nke ha, na-amalite oge nkwusa ozioma kpụ ọkụ n'ọnụ.
C1967: John Wimber chere na ọ ga-ahapụ ọrụ egwu ma debanye aha na Mahadum Azusa Pacific ka ọ mụọ Akwụkwọ Nsọ afọ atọ.
1970: Mgbe ha gụsịrị akwụkwọ, Wimber “debara aha” site n'aka ndị enyi. Ọ ghọrọ onye ụkọchukwu ụkọchukwu nke Yorba Linda Nzukọ ndị enyi wee gaa n'ihu na-eduzi ọtụtụ ọmụmụ Bible nke na-esiwanye ike na ndị bịara nke ọma. Ha bịakwutere ndị isi okpukpe okpukpe Southern California.
1974: A gwara John na Carol Wimber na mmadụ iri anọ n’ime ụmụ akwụkwọ ha na-amụ Bible ka ha pụọ ​​na Nzukọ Ndị Enyi. John Peter Wagner kpọrọ John òkù ka ọ nyere aka chọta Fullọ Ọrụ Fuller ọhụrụ maka Ọganihu Churchka.
1975-1978: Wimber kụziri uto ụka na ịkọ ihe dịka ngalaba na-arụ ọrụ na Fuller ka ọ na-aga n'ihu na-eduzi ọmụmụ Bible na-eto eto.
1977: Ọmụmụ Bible mụbara ma tinye ya dị ka ọgbakọ nke Calvary Chapel.
1979: Wimber zutere Ken Gullicksen, onye ọzọ so na Calvary Chapel movement, mgbe ịlaghachi azụ.
1980: Lonnie Frisbee kwusara ọgbakọ Wimber ozi ọma na Motherbọchị Ndị Nne, na-ebute mwepụta nke ihe ịtụnanya.
1982-1986: Wimber na Wagner kụziri ihe ịrịba ama, ebube, na Ọganihu ụka na Fuller.
1982: Wimber mechiri Calvary Chapel maka Wimber na-ekwusi ike na ihe ndị mara mma, na, na ọtụtụ ndị ọzọ Calvary Chapel, sonyeere òtù Gullicksen nke ụka Vineyard. Gullicksen gwara Wimber ka ọ bụrụ onye isi.
1982: Vineyard Christian Fellowship nke Anaheim ka etinyebere.
1984: Ubi Vineyard Minista International guzobere.
1985: incorpolọ Nzukọ Ubi Vineyard. Ebere Ebere (mgbe emesịrị Ubi Vineyard).
1986: Wimber bipụtara akwụkwọ ya Nkwusa ozi oma.
1986: Wimber nwere nkụchi obi.
1988: Wimber guzobere mmekọrịta chiri anya na ọnụ ọgụgụ amụma nke Kansas City Fellowship (nke aha ya bụ Kansas City Vineyard).
1991: Wimber nwere nkụda mmụọ na "ndị amụma" Kansas City ma mebie mmekọrịta ahụ.
1994: Ntughari "Toronto Blessing" malitere na Toronto Airport Vineyard Church. Ọ dọtara uche mba ụwa gaa oke ihe ịtụnanya.
1993-1995: Wimber natara nchoputa kansa ma nwee oria.
1995: Wimber hụrụ mmaliteghachi nke "Ngọzi Toronto" wee belata njikọ ya.
1997 (July): Wimber wụnye Todd Hunter dịka Onye Nchịkọta Mba nke Association nke Ubi Ubi Vine.
1997 (November): Wimber nwụrụ n'ihi oke ọbara ọgbụgba ụbụrụ.
2000: Hunter gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya. Boardlọ ahụ aha ya bụ Bert Wagoner nke Sugarland, Texas, ga-anọchi ya.
2011: Wagoner lara ezumike nká ma dochie Phil Strout nke Maine.
Òtù Ubi Vineyard (ma ọ bụ osisi vine) na-esite n'okpukpe Jizọs nke mepụtara na omenala hippie nke Southern California na 1960s. A na-arụ ọrụ a gburugburu ndị na-ezisa ozi ọma na-arụ ọrụ nke ukwuu site na ìgwè ọmụmụ ọmụmụ dabeere na ụlọ kama ịdabere na chọọchị dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ìgwè ndị a gụnyere ndị na-ahụ egwu egwú, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a ma ama.
Mmadụ atọ n'ime ndị na-ezisa ozi ọma bụ ndị na-enweghi ihe ịga nke ọma tinyere aka na mmepụta nke ụka abụọ: Chuck Smith tụgharịrị ìgwè ọmụmụ Bible na Calvary Chapel ije (Ụlọ Akwụkwọ na Vine 2015), Ken Gullicksen weghaara ìgwè ya n'ime ihe ga - abụ Ugbo Ubi. Onye nke atọ, nke kachasị mma Lonnie Frisbee, bụ isi ihe na-eme ma ọ bụghị otu, mana ọ na-adịkarịghị akpọ taa maka ọgụ ya na nwoke idina nwoke (Randles nd). Otu isi ihe anọ dị na ihe omumu ọmụmụ Bible bụ John Wimber.
John Wimber dị na February 25, 1934 na Kirksville, Missouri ma ọ bụ Peoria, Illinois na Basil Wimber na Genevieve Estelynn (Martin) Wimber. Ọ gosipụtara talent dị egwu dị ka nwatakịrị ma nata saxaphone mbụ ya mgbe ọ dị afọ isii. Ọ dị afọ iri na abụọ mgbe ya na nne ya kwagara California, ọ bụkwa nanị afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị ka o mere ọkachamara mbụ ya dị ka onye na-egwu egwú. Na 1955, Wimber hụrụ nwunye ya n'ọdịnihu, Carol, onye so na ya Oge a, ya prom egbe. Di na nwunye ahụ lụrụ ọnwa asaa ka e mesịrị. Oge a ga-arụ ọrụ sekit Las Vegas maka afọ ise ọzọ. Wimber (dị ka Johnny Wimber) na-egwu bọtịnụ. Wimber tinyere aka n'idozi ìgwè a ma ama Ụmụnna Ndị Ezi Omume (Jackson 2005: 134). Ndị Wimber gafere oge nke alụmdi na nwunye ma mesịa lụọ na Chọọchị Roman Katọlik (Randles nd). Mgbe ahụ, ha tinyere aka na Nzukọ Mmekọrịta (Holsteine ​​2006: 3) ma mechara "gbanwee" n'otu oge na ọmụmụ Bible nke ụkọchukwu ozioma Gunner Payne (Randles nd) na-edu. N'ihe dị ka n'oge ahụ, ndị Wimbers, bụ ndị sonyere n'ọmụmụ Bible mụbara nke ọma karị. John Wimber na-edu ọtụtụ ndị site na Nzukọ Ndị Enyi, nwunye ya Carol kwukwara otu n'ime ụlọ ha na Yorba Linda, California, nke dị na Anaheim (Randles nd).
N'ihe dị ka oge a, 1965-1967, John Wimber chere ka ahapụ ụlọ ahịa egwu (James 2009: 2), na-edebanye aha na Mahadum Azusa Pacific iji mụọ Bible (na Kraịst 2013: 1). Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na 1970, Wimber "debara aha" (nke ndị Society) họpụtara, na-esonyere ndị ọrụ nke Nzukọ Enyi nke Linda (Yoruba) 2013: 1. Mmekọrịta ya na ọmụmụ Bible mụbara. N'otu oge, ọ na-edu otu iri na otu dị iche iche, na-agụnye ọtụtụ narị ụmụ akwụkwọ (òtù) (Vineyard USA website 2012).
Ozi ọma nke Wimber ghọrọ ihe na-enweghị obi ụtọ n'etiti ndị Enyi, na, na 1974, a gwara ndị Wimbers na ihe dị ka mmadụ iri anọ na-akwado ha ka ha hapụ Nzukọ Ndị Enyi (Holstein 2006). Ka ọ dị ugbu a, uto nke ọmụmụ Bible Wimber dọtara uche ndị ọzọ na ndị okpukpe okpukpe Southern California, gụnyere prọfesọ uto ụka na Fuller Theological Seminary, C. Peter Wagner (Jackson 2005: 135).
Wagner na-akpọ Wimber ka o nyere aka chọpụta Ụlọ Ọrụ Fuller maka Ulo Okpukpe na seminarị, ebe Wagner kụziri na 1975 site na 1978. N'oge ahụ, Wimber na-amụ ihe ndị na-eme ka uto nke ụka, ọ bụghị nanị na North America kamakwa n'ụwa. O kwubiri na mmeghari obi ndi ozo bu ihe di egwu. Nke a bụ ihe gbanwere maka Wimber na maka Wagner, bụ onye ghọtara uru nke ihe ime mmụọ n'oge a (Jackson 2005: 134, 135). Ka ọ dịgodị, Wimber nọgidere na-amụbawanye ọmụmụ Bible ya, ruo n'ókè nke itinye ya dịka ụka n'okpuru ụda ụlọ Kalvary Chapel. Ọ malitere itinye ihe ọ mụtara banyere uto chọọchị (Randles nd; Dager 1997).
Mgbalị mbụ nke Wimber iji mepụta ọmarịcha ihe ịtụnanya na chọọchị ya enweghị ihe ịga nke ọma ozugbo, mana mgbe ọnwa asaa gasịrị, enwere ọgwụgwọ. Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, Lonnie Frisbee kwusara ozi ọma na ụbọchị nne m 1980, kpee ekpere maka ịkọwapụta ụdị ahụm mere (Jackson 2005: 134). Wimber na chọọchị ya nọgidere na-ekwusi ike na ịgba akaebe nke ọnụnọ nke Mmụọ Nsọ dị ka ihe ịrịba ama nke ihe ịga nke ọma, na ụlọ ụka Wimber na Anaheim, California toro ngwa ngwa (Jackson 2005: 134; VineyardUSA website nd).
Otu afọ ma ọ bụ karịa gara aga, Wimber zutere onye nkwusa ozioma ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ ọzọ, Ken Gullicksen, na ezumike nke ndị ọzụzụ atụrụ Calvary Chapel. Gullicksen [Image na nri] enweela ihe ịga nke ọma na ọmụmụ Bible ya na ịgbanye ìgwè ọmụmụ ndị ahụ n'ime ọgbakọ. Gullicksen onwe ya kwuru, sị, "Anyị na-atụgharị ọmụmụ Bible n'ime ụka dịka nne na nna a na-atụghị anya ya." Gullicksen rụrụ ọrụ n'oge ahụ n'okpuru ọkọlọtọ Calvary Chapel, ọ bụ ezie na ọ kpọrọ ụka ndị a "Vineyards." E nwere ihe dị ka ụka isii (Chandler 1992: 281-90 ).
Site na 1982 ruo mgbe a kwụsịrị akwụkwọ ahụ na 1986, Wimber laghachiri Fuller na ihe ndabere iji kụziere ya, na Wagner. Ha na-akụzi ihe omume nke a na-akpọ "Ihe Ịrịba Ama, Ihe Ịrịba Ama na Ọganihu nke Chọọchị," ndị ụmụ akwụkwọ kpọrọ aha "ọrụ ebube" (Randles nd). Ma Wagner na Wimber kwenyesiri ike n'ụzọ doro anya na ihe dị otú ahụ bụ ihe dị mkpa na-eto eto.
Ikebịghike ke ama ọkọtọn̄ọ ndikpep ukpepn̄kpọ Ukpepn̄kpọ, Wimber, Gullicksen ye ediwak mbon en̄wen ama ekesịm ke ufọkn̄wed Chuck Smith ye Calvary. Wimber akpan akpan, ma ndị ọzọ kwa, chere na ọ dị mkpa ka e mesie "ihe ịrịba ama na ihe ebube" dịka ụzọ nke na-adọta ndị si n'ezi ofufe dapụ. Smith chere na ọ dị mkpa ka ị nọgide na-elekwasị anya n'ọmụmụ Bible. Ha kwenyere na nkewa na-adọrọ mmasị, Wimber jikọtara Gullicksen, na-edegharị chọọchị ya Vineyard Fellowship nke Anaheim. Okpukpe ndị ọzọ dị na Calvary ndị ọzọ na-abanyekwa n'òtù Ubi Vine (Dager nd).
N'ịbụ onye nwere ibu ọrụ nke na-eduzi ihe dị ugbu a nke ihe dị ka ụlọ ụka iri na ise, Gullicksen jụrụ Wimber ka ọ bụrụ onye ndú (Miller 2005: 148). Ndị otu ụka na-amụba ngwa ngwa, na, na 1984, ọ gbasaa na Kanada, na-arụ ọrụ ubi vaịn Ministri International (VineyardUSA website nd) Otu afọ ka e mesịrị, Nzukọ Ubi Vineyard (Randles nd).
Ihe ndị a kpatara ọgba aghara nke ubi vaịn. Ruo n'oge ahụ, ha rụrụ ọrụ dịka otu ụka dị iche iche nke onwe ha. Nke a kwekọrọ na ọchịchọ ịzere ozizi na atụmanya ndị nwere ike ime ka ndị nwere ike ghara inwe obi iru ala. N'enweghi obi uto, ndi ochichi kwetara na ulo uka Vineyard mere, n'ezie, bu otu aha (Factualworld nd).
Ikebịghike, ke 1986, Wimber ama ewet n̄wed emi Nkwusa ozi oma, akọwa usoro na nkwenkwe nke Ubi Vineyard. O kwuru na ụzọ ndị vaịn na-eji dochie anya nkwusa ozi ọma dabeere na Bible nke ụka ndị ọzọ. Wimber kwuru na na-enweghị "ihe ịrịba ama na ihe ebube" iji gosi na ha dị irè, ụzọ ndị a bụ ihe na-adịghị mma (Dager 1997: 9).
Nakwa na 1986, Wimber nwere nkụchi obi, mana ọ gbakere ngwa ngwa, site na 1988, ọ nọ na mkparịta ụka ya na ndị amụma amụma nke Kansas City Fellowship. Otu a, nke mmiri ozuzo ikpeazụ nke 1940 nwere mmetụta, gụnyere Paul Cain (onye sonyere na mmiri ozuzo ikpeazụ n'oge ọrụ ya), Bill Hamon (onye sobu na Latter Rain), Rick Joyner, Bob Jones, Mike Bickle, Lou Engle na ọtụtụ ndị ọzọ (Jackson 2005: 138). Ndị ikom a kwadoro echiche "ozi ise" nke mgbasa ozi nke mmiri ozuzo ikpeazụ. Ugboro ise bụ nkwenye na ọfịs ise ahụ a kpọtụrụ aha na Ndị Efesọs 4: 11 (onyeozi, onye amụma, onye pastọ na onye nkụzi ozioma) na-arụsi ọrụ ike ma dị irè na chọọchị nke oge a. Ndị ikom a mere onwe ha ka ha bụrụ ndịozi na ndị amụma. Ha nọkwa na-arụsi ọrụ ike na nkuzi ozuzu mmiri ozuzo ikpeazụ na nkuzi ụmụ Chukwu (Joel's Army) (Ka Anyị Mee Ihe Mere 2009: 5) ). Kansas City Christian fellowship, nke Mike Bickle bụ pastọ, weghachite onwe ya na Kansas City Vineyard, na ruo oge ụfọdụ a na-ekwu na ìgwè a nwere mmetụta dị ukwuu na Wimber na ndị isi ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ubi vaịn ahụ. Wimber kwadoro ndị ikom a ka ha nye ndị ọzọ nọ n'ubi Vineyard (Jackson 2005: 137).
Otú ọ dị, site na 1991, ya na onye ọrụ ibe ya bụ Peter Peter Wagner, Wimber nwere nkụda mmụọ na Kansas City, na-akọ n'ihi amụma na-akụda na ajụjụ gbasara omume metụtara Bob Jones (Jackson 2005: 137). Wimber kwụsịrị mmekọrịta ahụ na chọọchị Kansas City maliteghachiri aha mbụ ya (emesịa IHOP, Houselọ Ekpere nke Mba Nile), mana Mmiri ozuzo Ikpeazụ gara n'ihu n'ụzọ doro anya n'echiche Wimber. Ọ dịkarịa ala otu akwụkwọ kọwara nkuzi Wimber dị ka "onye ọchịchị doro anya," a kpọkwara ya ugboro ugboro na isiokwu Joel's Army, dịka onye ọrụ ibe ya bụ Peter Peter Wagner (Randles nd: 1; Gilley 2004: 5).
Na 1994, otu osisi Vineyard chere ihu na ọ ga - abụ ihe kasị sie ike ruo n'oge ahụ. Na January nke afọ ahụ, John Arnott na nwunye ya bụ Carol, ndị pastọ nke chọọchị Toronto Vineyard, kpọrọ Pastọ Randy Clark nke St. Louis iji kwusaa ozi ọma na chọọchị ha. Clark, onye Rodney Howard-Brown, onye nkwusa ozioma nke South Africa, nke a maara maka "Ezi ọchị", kwusara ozi ọma na mbido Jenụwarị ruo otu ìgwè gbasara 150, ọtụtụ n'ime ha dabara na nchịkwa a na-enweghị ike ịchịkwa, dabara na ala. gosipụtara ihe ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ (Riss 1996: 1).
N'oge na-adịghị anya, nnukwute ntụrụndụ bilitere, gụnyere ọtụtụ puku ndị si gburugburu ụwa na isi, mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga n'ihu. N'ime ihe dị ka otu afọ, ihe ndị na-adọrọ adọrọ dịwanye njọ, gụnyere ndị na-eme anụ. Na 1995, Wimber gara Toronto, na-ahụ ihe ndị ahụ, mgbe ahụ, site n'enye nkwado nke onye ndu ya, "a tọhapụrụ" ìgwè ndị Toronto sitere n'ìgwè Ubi Vineyard, ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe ọ jụghachitere mmalite ahụ. Njegharị ahụ bụ esemokwu, ọbụna n'ime ubi vine (Jackson 2005: 138).
N'oge a, na 1993 site na 1995, Wimber chọpụtara na kansa na-arịa ọrịa strok; o doro anya na ahụ ike ya amalitela ịkụ afọ n'ala. Na 1997, Wimber na-akpọ otu n'ime ndị ndú ya, Todd Hunter, dịka Onye Nchịkọta Mba nke Òtù Ndị Ubi Okpukpe Vineyard. Okpukpo ahu ka na-eto eto ngwa ngwa n'oge a, ma site n'icheta ulo akwukwo na site na inweta nzuko ndi choro isonyere (Miller 2005: 151, 152).
Wimber bu ụzọ tinye usoro nchịkwa mba, na-ebu ụzọ wụnye ndị nlekọta mpaghara anọ na United States, ma mee ndị nlekọta ahụ, onye nduzi mba na ndị pastọ abụọ ọzọ bụ ndị na-achịkwa mba (Factualworld 2015: 2). Ka o sina dị, mgbe John Wimber nwụrụ na November 1997of ụbụrụ ụbụrụ ụbụrụ buru ibu, enweghị nnọpụ ya hapụrụ nnukwu ọdịiche n'ime ndu ndú ubi vaịn ahụ. Ụlọ ahụ aha ya bụ Todd Hunter National Director (Miller 2005: 151, 152).
Hunter mere nnukwu ụzọ abụọ iji mee ka ụka dịghachi. Mbido nke mbụ bụ ịkwụsị ọrụ niile nke etiti na-ahapụ naanị ndị na-achịkọta ọzụzụ atụrụ, ha bụ ndị ozuzu aturu. Ebumnuche Hunter bụ ịhapụ ihe ọ kpọrọ "oge obi ụtọ" nke ga - eme ka ndị ozuzu aturu n'otu n'otu nwee olu siri ike nke ga - emebi Ubi Vine ahụ (Miller 2005: 152). Ihe nke abụọ Hunter mere bụ ịgbaso ebumnuche Wimber iji mee ka chọọchị ahụ dị mkpa. Ọ chọrọ ịmepụta mmegharị nke ga-akpọku GenXers na Millenials, ọkachasị ụka n'ime ụka (Miller 2005: 141). N'okwu abụọ a, ọ pụtara na ọ nweghị isi. Ọ gbara arụkwaghịm na Mee nke 2000, wee gaa Chọọchị maka Sake nke Ndị Ọzọ (C4SO) dị ka diocese nke Chọọchị Anglịkan na North America (Miller 2005: 155).
Boardlọ ọrụ ahụ họọrọ Bert Wagoner, onye pastọ si Sugarland, Texas iji dochie Hunter. Oge Waggoner dị afọ iri na otu dị ka Onye isi nchịkwa Mba na-etinyekarị ụgbọ mmiri Ubi Vineyard na-aga n'ihu, na-elekwasị anya na ịkụ mkpụrụ ụka na ikwusa ozi ọma (Factualworld 2015: 1). Dịka ọmụmaatụ, na 2011, o duziri ọmụmụ ihe nke degharịrị nkwupụta ubi vaịn nke isi ụkpụrụ (World Heritage 2014: 3).
A na-ahụta ụka Vineyard ka ọ bụrụ akụkụ nke "ebili nke atọ" nke okwu na-adọrọ adọrọ, nke mbụ bụ mmaliteghachi Azusa Street nke 1940s na nke abụọ mmegharị mmụọ nke 1950s na 1960s. Okwu Wimber wetara okwu a na Fuller Seminary, C. Peter Wagner (Jackson 2004: 133). Wagner bu ụzọ jiri okwu bụ "post denominationalism" kọwaa ihe ịtụnanya. Wimber kọwara ọnọdụ okpukpe ya dị ka "onye nọ n'etiti" mgbe akwụkwọ Bill Jackson kpọchara Nchọgharị nke Middle Radical Middle. Ebumnuche ahụ na-egosipụta mgbalị ịchọta ụzọ dị n'etiti Pentikọst na Charismatic (Jackson 1999).
Site n'ọtụtụ akụkọ ntolite ya, Association nke Ubi Vineyard na-anwa izere ịtọ ntọala ozizi. Nke a apụtaghị na enweghị nghọta na nke a na-ejikarị eme ihe n'okwu banyere mmụta okpukpe, kama ọ bụ na ụka ahụ gbadoro ụkwụ na uto na iru ọtụtụ mmadụ. Ọtụtụ n'ime ndị otu ahụ kwenyesiri ike na ozizi na ememe iwu ga-ewepụ kpọmkwem ndị ha na-anwa iru. Ọzọkwa, nkuzi John Wimber bụ ntọala bụ isi ma ọtụtụ echeghị na ọ dị mkpa karịa.
N'eziokwu, n'otu nzukọ ndị pastọ na-elekọta ihe ubi na 1992, Wimber kụziri n'akụkụ iri nke ozi ọ na-ewere dị mkpa maka ụka ọ bụla Vineyard. Ọ kpọrọ ebe ndị a na mkpụrụ osisi Vineyard Genetic Code n'ihi na ha bụ ihe ọ na-eche na ọ bụ ihe ubi Vineyard. Ndị a gụnyere:
Kọwaa, ziri ezi, nkuzi Akwụkwọ Nsọ.
Ofufe nke oge a na nnwere onwe nke Mmụọ Nsọ.
Onyinye nke Mo Nso n'olu.
Ozi obere obere ọrụ.
Ozi maka ndị ogbenye, ndị inyom di ha nwụrụ, ụmụ mgbei na ndị gbajiri.
Ọgwụgwọ anụ ahụ na-emesi ike na ihe ịrịba ama na ihe ebube dị ka a hụrụ n'akwụkwọ Ọrụ.
Nkwenye maka ozi ndi ozo - ulo akwukwo na ulo na mba uwa.
Ịdị n'otu n'ime ahụ dum nke Kraịst; mmekọrịta ya na ụka ndị ọzọ.
Mgbasa ozi ọma.
Ịkwado ndị nsọ na mpaghara dịka ịbụ onye na-eso ụzọ, ozi, ije ozi, inye onyinye, ego, ezinụlọ, na ihe ndị ọzọ (Williams 2005: 180)
Ubi Vineyard Genetic Code na-achota Ubi Ubi-vine n'uzo ebe Wimber kwuru na ya choro ka ha buru ndi ozo di n'etiti ndi nzuko Pentikostal na ndi mara amara (Jackson 2004: 135). Na mgbakwunye na nkwupụta a, Wimber na-ekwukarị na Ụlọ Nzukọ Ubi kwesịrị ime ka Mmụọ Nsọ mee ihe ndị a na-atụghị anya (Williams 2005: 181).
Na 1994, Otú ọ dị, Wimber na ndị isi ụka ahụ kpebiri na ọ dị mkpa iji bipụta Nkwupụta Okwukwe maka ọganihu na-eto ngwa ngwa ma dịgasị iche iche. N'ịkwupụta Nkwupụta ahụ, Wimber gosipụtara na ọ nọ na-ewu ya ruo afọ iri, kemgbe mmalite nke mmegharị ahụ (Williams 1994: 180). Nkwupụta ahụ n'onwe ya bụ ụma okwu na-enweghị esemokwu nke nkwenkwe ozi ọma a na-ekwukarị (Williams 2004: 180), ọ bụ ezie na okwu ahụ na-egosipụta ike mmụta okpukpe Alaeze, nkwenye na Alaeze Chineke dị ebe a na ugbu a, n'agbanyeghị na amatabeghị ya . Isiokwu abụọ mbụ (nke iri na abụọ) malitere na okwu bụ "Chineke bụ Eze," na ọtụtụ ndị ọzọ gụnyere okwu yiri ya (Vineyard USA website 2012). Ebe ọ bụ na nkà mmụta okpukpe nke Alaeze bụ ọnọdụ a na-enwe n'etiti Pentikọstal, na karịsịa n'etiti ụka Charismatic, nke a abụghịkarị nkewa nkewa (Jackson 2005: 134).
Site na 2004, enwere mmetụta na Nkwupụta Nkwenkwe a chọrọ nkọwa dị n'ọtụtụ ebe, na 2004, Berten Wagoner, bụ onye isi nchịkwa nke atọ, nyere usoro nkenke nke akọwapụtara na nke ahụ agbanweghị nkọwa dị na akwụkwọ mbụ ahụ, ma mee ya mee ka o doo anya ihe ụfọdụ na-akọwa (Williams 2004: 180). Na 2011, ọzọ n'okpuru nduzi nke Wagoner, ọtụtụ kọmitii weghachite Nkwupụta Okwukwe iji mee ka ọ dị mkpirikpi ma dị mfe. Nkwupụta ọhụrụ ahụ bụ naanị isi ise, ma ọ dịghị agbanwe usoro okpukpe nke Alaeze Kingdom (Vineyard USA website 2012).
Ubi vaịn bara uru bụ usoro mmụta okpukpe "nke na-aga n'ihu", nke na - ekwu na onyinye nke Mmụọ Nsọ [ịgwọ ọrịa, ịchụpụ mmụọ, glossolalia (na-ekwu okwu ma na-abụ abụ n'asụsụ dị iche iche)} ga - aga n'ihu dịka ọ dị taa dị ka n'oge nke ndịozi (Dagger nd: 4). Ihe ọzọ dị mkpa nke nkwenkwe Ubi vaịn bụ ọchịchị, nkwenkwe na mba a na ụwa kwesịrị ịchịkwa ndị Kraịst kpamkpam na ọkachasị Ndị Kraịst na-achọghị mgbanwe (InPlainSite nd). Nkwenkwe a yiri ka ọ bụ ọdịnala karịa akwụkwọ akụkọ ma sie ike ịgbaso ebe ọ bụ na ọ nweghị nkwupụta Ubi Vine adịghị. O nwere ike ịbụ site na mkpakọrịta Wimber na Wagner, onye akpọrọ Mazị Joel's Army (echiche sitere na theififant Sons of God theology of the Rain Rain) na onye dere ọtụtụ ihe banyere agha ime mmụọ. N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịbụ arịa nke Wimber na ndị amụma Kansas City, bụ ndị mmiri ozuzo ikpeazụ ahụ nwere mmetụta dị ukwuu (Holstein 2013: 1, 2, 3).
Ngbanwe mgbanwe na nso nso a metụtara ọrụ ụmụ nwanyị n'ọkwa ndị isi. Wimber nwere ọnọdụ "nkwado", ya bụ, na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere ọrụ dị iche iche mana na-arụkọ ọrụ ọnụ. Mụ nwanyị, na-amalite na nwunye Wimber Carol, esonyela na ndị isi nke Ubi Vine ahụ, mana dịka echiche a si dị, naanị ụmụ nwoke nwere ike ịbụ ndị isi ozuzu aturu. Usoro iwu nke ụka na-enye ohere maka ndị inyom a họpụtara ahọpụta (Loren 2007: 2), mana ebe ọ bụ na ndị isi ụka na-ahọpụta ndị pastọ Ubi vaịn karịa nke ụka, mkpebi ịhọpụta ụmụ nwanyị dị na ụka ọ bụla (Williams 2005: 182).
Ememe bụ isi nke ụka Vineyard bụ ọrụ ofufe ofufe Sunday. [Foto dị n'aka nri] Ebe ọ bụ na Association nke Ubi Vine Chọọchị bụ netwọk nke ụka dị iche iche na-anọchite anya onwe ha, ụdị ọrụ Sunday nwere ike ịdị iche, mgbe ụfọdụ (Miller 2005: 143, 146, 161. Williams 2005: 163). Dị ka ọ dị, ọrụ ubi vaịn na-amalite na oge ofufe na otuto, gụnyere ịgụ abụ nke oge a na okwu ndị a na-agwa Chineke. Egwú a na-abụkarị abụ e dere ede ma ọ bụ kpọmkwem maka Ubi Vine, ọ bụ ezie na a na-ejikarị ya ebe ọzọ taa. Ndị na-ahụ anya na-ekwu na ọtụtụ n'ime egwu a nwere ụda dị iche iche, Vinyard nwere onwe ya, Vineyard Music. E nwere otu ìgwè nke ọtụtụ ndị na-abụ abụ na-edu abụ, a na-echekwa okwu na nnukwu ákwà. Oge a nwere ike ịdịgide ruo ọkara otu awa ma ọ bụ karịa. N'oge a, ọgbakọ enweghị ohere ịnọdụ ala, guzoro ma ọ bụ kwagagharị. Ọtụtụ mgbe enwere ihe ọṅụṅụ dị na ya ma ndị a nwere ike iburu Miller 2005: 143).
A na-ejikarị okwu (okwu na nri) na-esochikarị oge ofufe (ihe dị mkpirikpi ma ọ bụ ozizi) na ajụjụ dị ugbu a ma ọ bụ Bible Itie. A na-enyefe nke a n'ụzọ dị mkparịta ụka, na-ezere okwu mkparịta ụka dị egwu nke a na-ejikọkarị na Pentikọstal, nkwenkwe ma ọ bụ nkwusa na-adọrọ adọrọ (Miller 2005: 143). Uwe maka ma ndị na-efe ma ndị isi na-efe ofufe bụ nke na-ezighi ezi. John Wimber, onye guzobere òtù ahụ, na-ekwupụtakarị okwu ahụ na-anọdụ ala n'elu oche dị egwu ma na-eyi uwe elu Hawaii (Loren 2007: 1).
Isoro okwu a bu oge ije ozi. Na ụka ndị na-eso usoro mbụ nke Ubi Vineyard, ma ọ bụ ụdị ụdị mweghachi ọzọ e ketara site na oge ndị amụma Kansas City, oge ọrụ nwere ike ịpụta "ihe ịrịba ama na ọrụ ebube" na-egosipụta ịdị adị nke Mmụọ Nsọ n'ime ọrụ ahụ. Na ọgbakọ ndị ọzọ "na-achọsi ike" ọgbakọ, ngosipụta pụtara ìhè nke mmụọ nwere ike ịbụ naanị ebe ndị ọzọ (Williams 2005: 168, 176).
Omenala nke abuo (ikekwe akpoghi ya nke oma ma obu ihe di nkpa), bu omumu akwukwo nso nke na-eme kwa ubochi, ma enwere ike hazie ya n'oge obula. Ọtụtụ ọrụ nlekọta na ọgwụgwọ nke Ubi Vineyard, yana nkwusa ozi ọma na atụmatụ maka ịbịaru na ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-ewere ọnọdụ n'ime otu ndị a, na-ekwusi ike na ubi vaịn ahụ kwenyere n'echiche nke ọkwa nchụaja nke ndị kwere ekwe niile site n'ịgba ndị otu niile ume ije ozi nke ụdị ụfọdụ (Williams 2005: 175, 176, 182, 185).
Ubi akwukwo vine na-akwado mmepe nke mmekorita nke onwe ya na Chineke, ma enwere akuko nke ndi ndi ha na Jisos nwere "ubochi abali"; esi nri nri pụrụ iche, na-edozi ebe ọzọ na tebụl, na-enwe mkparịta ụka na-akpachi anya (Rodgers 2012: 3).
Donald Miller (2005: 161) dere n'ụzọ nghọta na "Ubi vaịn ahụ… na-anọchite ụdị dị iche iche nke ndị otu okpukpe religious. Ubi vaịn ahụ bụ akụkụ nke 'ọhụụ ọhụrụ nke ụka dị iche iche na mmegharị ụka nke na-enyo enyo nke okpukperechi, The. Ụka ọhụrụ ndị a na-ahọrọ ịkọwa onwe ha dịka' mmegharị 'ma ọ bụ netwọkụ nke ụka ndị ejikọtara. Offọdụ n'ime ha ... na-ekwupụta na ha bụ akụkụ nke oge ọchịchị mgbe ochie…. ” Na omume, Ubi Vineyard yiri ka ha kewara ụzọ atọ. Typedị ndị bụ isi na-aga n'ihu na ụkpụrụ alaeze nke usoro ahụ bidoro. Typedị nke abụọ na-eso amụma amụma Latter Rain na mbugharị nke anata site na Ubi Vineyard na ndị amụma Kansas City. Typedị nke atọ na-eleghara ngosipụta ime mmụọ anya n'ime ọrụ ọha na eze, na-achọ ịbụ "onye na-achọ ihe ngwa ngwa," na-ezere omume ndị nwere ike ịtụ ụjọ ma ọ bụ nwee mgbagwoju anya.
Òtù Ndị Ubi Okpukpe Vineyard nwere banyere ụka 550 na United States na puku mmadụ ọzọ n'akụkụ ụwa. Ejikọtara ọnụnọ ndị na-abịa na United States banyere 80,000 ka 90,000 (VineyardUSA 2012; Miller 2005: 141). A ka depụtara ụlọ ọrụ mba dịka Stafford, Texas, ebe ọ nọ na ya mgbe Berton Wagoner ghọrọ onye nduzi mba. Ndi ndu bu ndi isi ndi isi, onye isi oche, onye nchikota nke mba, na ndi ozo ndi ozo iri na ano. E nwekwara ndị isi obodo iri na isii, onye ọ bụla n'ime ha na-ahụ maka ọtụtụ ndị isi obodo, ndị na-arụ ọrụ maka ndị isi chọọchị nke ọtụtụ ụka. Ndị a niile bụ ndị ozuzu ụka na-arụsi ọrụ ike nke ụka (VineyardUSA website 2012). Onye ndu ndi ochichi di iche iche, ulo uka vine na-abia na netwọk mmekorita. Ọrụ nke ndị isi obodo na ndị mpaghara bụ nkwurịta okwu, nkwado, na onye nduzi karịa nlekọta. E nwere ike ịme iwu mba na nnọkọ mba, ọ bụ ezie na ndị a bụ ihe mkpali (Miller 2005: 182, 183, 184).
A na-akọ ụka ụka vaịn ọtụtụ mgbe ma na-akatọ ya n'ụzọ ọjọọ ọtụtụ afọ. Ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ n'ime nkatọ nwere ike ịchọta na ụka ndị na-asọ mpi na-emeghachi omume na ihe a na-aghọta dịka "izu ohi atụrụ" (ihe mgbaru ọsọ ezubere iche nke ndị otu ụka site n'aka onye ọzọ) (Miller 2005: 162).
Ikekwe ihe ịma aka kachasị njọ sitere n'okpukpe ndị na-adịghị agbanwe agbanwe bụ ndị na-akatọ ọgba aghara na ọtụtụ ọnụ ọgụgụ. Nke kachasị n'etiti ndị a bụ ebubo na nkà mmụta Ubi vine bụ ihe na-adịghị na Akwụkwọ Nsọ ma dabere na mkpughe nke Akwụkwọ Nsọ, ahụmahụ na amụma (Jackson 2005: 137; Randles nd: 5, 6; Holstein 2006: 5). Nke a bụ ihe ịma aka na-adọrọ mmasị. N'aka nke aka, Ubi Vine ahu enweghi ihe omuma nke ndi ozo ruo otutu afo, ma mgbe mmadu biputara, ihe edere n'akwukwo nso kwadoro ya nke oma, otu n'ime isi ya bu ihe choro maka ntọala siri ike nke Baibul. Ọzọkwa, dị ka e kwuru n'elu, Nkwupụta nke Okwukwe bụ ụma na-enweghị esemokwu, na nkà mmụta okpukpe nke Alaeze abụghị ihe a na-ahụkarị site na mkpesa (Williams 2005: 173). N'aka nke ọzọ, Wimber n'onwe ya kwuru okwu ndị dị ka "Chineke karịrị okwu ya" nakwa na Akwụkwọ Nsọ agaghị ejigide ya. Ọ na-atụ aro na "okwu nke ihe ọmụma" (nke na-ezo aka na mmeghe nke Akwụkwọ Nsọ) nwere ike ịre dị oke mkpa, ma eleghị anya hà nhata na mkpughe nke Akwụkwọ Nsọ (Dager 1997: 2).
Ọzọkwa, ozi “ihe ịrịba ama na ihe ebube” nke Ubi Vine ahụ na-ewelite nkewa mmụta okpukpe ochie dị n'etiti ndị na-aga n'ihu (ndị kwenyere na onyinye nke mmụọ nsọ na-aga n'ihu) na ndị na-akwụsị akwụsị (ndị na-azọrọ na onyinye ndị dị otú ahụ kwụsịrị na njedebe nke oge ndịozi) (Randles nd: 2; Holstein 2006: 2). Wimber kwadoro echiche nke mkpughe Akwụkwọ Nsọ n'oge na-adịghị anya, mana itinye aka na C. Peter Wagner na emesịa ya na ndị amụma Kansas City mere ka echiche a sie ike. Isi mmalite nke echiche ndị a edoghị anya ebe Wimber, dị ka Wagner, nwere amụma nke ịghara ịzaghachi nkatọ (ha abụọ mechara mee ya, mana azịza ha ezughi oke) Jackson 2005: 137).
Nkozo ndi ozo, nke bu nke ndi na-achota ndi ozo, bu uzo nke Ubi Vine ahu iji tinye okwu a bu "onye na-adighi ndu" n'ikwu okwu banyere oru nke Baibul. Nke a bụ ntụgharị uche, ebe ọ bụ na nkwupụta vaịn nke okwukwe na-akọwa Akwụkwọ Nsọ dika "enweghị njehie na ihe odide mbụ ya" (CRI Nkwupụta 2009: 2; VineyardUSA 2012).
N'ikpeazụ, e nwere ajụjụ onye Onye Ubi vaịn na-eru. Enweghị ezi ajụjụ na ọgbakọ Vineyard bụ, dịka ndị pastọ ha, nke na-acha ọcha, nke kachasị dị n'etiti ndị na-eto eto na ndị okenye. Ha bụ ọdịbendị nke Wimber chọrọ iji dị mkpa. Ma ọgbọ ahụ emewo agadi, na Gen-X na Millennials, n'okwu Todd Hunter, chọta ụda nke Vineyard music dịka oge ochie dị ka Bach mere Boomers. Ha na-abịakwute echiche nke okpukpe n'otu ụzọ dị iche iche nke oge a (ebe Boomers bụ kpọmkwem oge a na ha anya) (Miller 2005: 150).
Ma Ubi Vine ahụ ọ ga - ahụ ụzọ ọ ga - esi metụta ọdịnala ọhụụ a, dịka Hunter tụrụ aro, isi sekpụ aka na - aga n'ihu ịga n'ihu n'ikwusa Ubi Vine na ụka. Ihe ọzọ achọrọ ga-abụ ụzọ iji dị iche iche iji nọrọ na ọdịbendị dịka ọdịbendị na-adịwanye iche (Miller 2005: 150. Williams 2005: 186). Dị ka otu onye ụkọchukwu Ubi Vine chịkọtara ihe ịma aka ahụ, “Anyị na-agba mbọ ichekwa obi John nyere anyị,” ka ọ na-ekwu. "Ọ bụrụ na anyị nwere ike inwe obi ahụ na-aga n'ihu n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, anyị ga-eme nke ọma" (Loren 2007).
Image #1: Foto nke John Wimber, onye guzobere Association nke Ubi Ubi.
Image #2: Foto nke C. Peter Wagner bụ onye kpọrọ Wimber ka o nyere aka chọta Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọganihu nke Ụlọ Akwụkwọ.
Image #3: Foto nke Kenn Gullicksen bụ onye sonyere John Wimber n'ịmepụta Ubi Vineyard nke Anaheim.
Foto #4: Foto nke ubi vaịn ofufe.
Image #5: Foto nke oge ịṅụ mmanya vaịn.
Foto #6: Ụka nke Ubi Vineyard na-akpakọrịta.
Chandler, Russell. 1992. Mmiri gaa na 2001. Rap Rapids, MI: Zondervan.
Plọ ekpere na Vine. 2015. "Akụkọ ihe mere eme anyị." Nweta site na http://chapelonthevine.org/pages/ourhistory.aspy na 24 February 2015.
Dager, Albert James. 1997. "John Wimber na Ubi Vine ahụ." Nweta site na http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/wimber/john.htm na 16 February 2015.
Ezigbo. 2015. "Ubi Vine." Nweta site na http://www.factualworld.com/article/vineyard_movement na 4 January 20155.
Gilley, Gary. 2004. "Ubi Vine na 'Christian' Charismania." Ozi Nghọta nke Akwụkwọ Nsọ. Nweta site na http://rapidnet.com/~jbeard/bdm/psychology/vine/vineyard na 4 January 2015.
Holstein, Joanne. 2006. "Ubi Vine." Becker Bible Studies Library. Nweta site na http://guidedbiblestudies.com/library/vineyard_church.htm na 4 January 2015.
Jackson, Bill. 2005. "Akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi nke Association nke Ubi Vineyard." Pp. 132-40 na Church, Identity and Change, nke David A. Roozen na James R. Nieman dere. Ukwu Rapids, MI: Erdmans.
James, Christopher B. (2009) Jesus Dust: Zute John Onye Ọrụ Ebube, Akụkọ na Legacy nke John Wimber. ” Nweta site na http://www.jesusdust.com/2009/02/meet. John-the-miracle-worker.html na 16 February 2015.
Loren, Julia C. (2007. "Ihe Nlekọta nke Onye Dị Umeala n'Obi." Nweta site na http://www.charismag.com/site-archives/508.features na 1 April 2015.
Miller, Donald E. 2005. Na-enyocha Charisma: Ubi Vineyard Christian Fellowship. ” Pp. 141-162 na Church, Identity and Change, nke David A. Roozen na James R. Nieman dere. Ukwu Rapids, MI: Erdmans.
Randles, Bill. nd "Mgbọrọgwụ: John Wimber na Ubi Vine ahụ." Nweta site na http: www.inplainsite.org/vineyard_johnwimber.html na 4 January 2015.
Mahadum Regent. na "John Wimber usoro iheomume." Ụlọ Akwụkwọ Mahadum Regent John Wimber Collection. Nweta site na http://www.regent.edu/lib/special_collections/wimber-files na 20 February 2015.
Riss, Richard M. (1996) Akụkọ banyere Revival 1992-1995, Ubi Vineyard. ” Nweta site na http://grmi.org/richardriss/history/vineyard.html na 27 February 2015.
Rodgers, Paul. 2012. "inghụ na ikwere." Nweta site na http; // www.newyorker.com/magazine/2012/04/02/seeing-and-believing na 27 February 2015.
Vineyard Christian Fellowship website. "Oge Ntanye Ndụ nke John Wimber na Ubi Vine." Nweta ya site na http://www.ourvineyard.org/Time na 25 February 2015.
Williams, Don. 2005. "Atụmatụ nke nkà mmụta okpukpe banyere Ubi vaịn Ndị Kraịst." Pp. 163-87 na Church, Identity and Change, Edited by David Roozen na James Nieman. Ukwu Rapids, MI: Erdmans.
Na Kraist. 2013. "Ubi Vineyard Christian Fellowship - a Expose." Nweta ya http://withchrist.org/vineyard na 5 January 2015.
Encyclopedia World Heritage. 2014 "Nzukọ Ubi Okpukpe Vineyard." E nwetara site na http://www.worldheritage.org/article/WHEBN0000336482/Association%20of%20Vineyard%20Churches na 14 February 2015.